पाँच प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य - Naya Pageपाँच प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य - Naya Page
पाँच प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य
नाम तय नभएकोले प्रदेश–१ र २ मा भने अनिवार्य गरिएको छैन
काठमाडौं, २८ कात्तिक । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १ मंसिरदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको हो ।
त्यस्तै, १ फागुन ०७८ देखि सवारी नामसारी गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, १ जेठ ०७९ देखि भने सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनु पर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन सार्वजनिक सवारी, पर्यटन सवारी, निजी सवारी, सरकारी सवारी र संस्थानका सवारीलाई अनिवार्य गरिएको हो ।
अहिले बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुनेछ । प्रदेश १ र प्रदेश २ मा भने प्रदेश नाम निश्चित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने भएकाले अहिले स्थगित गरिएको हो,’ यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले भने । प्रदेशको नाम तय हुने बित्तिकै ती प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग वा ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइले नभएर अदालतको आदेशअनुसार ढिलाइ भएकाले म्याद थप गर्नुपरेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । दुवै पक्षको कमजोरी नभई अदालतमा परेको मुद्दाका कारण ढिलाइ भएकाले म्याद थप गरेर काम गर्न थालिएको हो ।
इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा राख्ने कि अंग्रेजी राख्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जडानको काम रोकिएको थियो । तर, अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान वा वितरण गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले २७ मंसिर ०७६ मा खारेज गरेको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर) मा बुट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा समय थप गर्दा पनि कुनै किसिमको थप लागत सरकारले दिनु नपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत रहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि १७ जेठ ०७३ मा सरकारले ६० महिनाको समायावधि दिएर ठेकेदार कम्पनी बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गरेको थियो । जडान थालनी भने ५ भदौ ०७४ मा भएको हो । तत्कालीन पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराइको गाडीमा प्लेट जडान गरेर थालनी गरिएको थियो ।
१. इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आए सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो ‘फिक्स’ हुने भएकाले परिवर्तन गर्न मिल्दैन । १० वर्षसम्म त्यही नम्बर प्लेट रहिरहन्छ ।
२. अहिले कतिपय सवारीसाधन कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर राखेपछि कर नतिरी सवारी सञ्चालन गरेमा तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।
३. इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहन्छ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
४. इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली सवारीसाधन पनि विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसारका हुनेछ । संसारभर नै सवारीसाधनको नम्बरमा एकरूपता आउनेछ ।
५. अहिले नेपालमा नौ प्रकारका नम्बर प्लेट छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रपति, सरकारी, कूटनीतिक, निजी र व्यावसायिक (भाडा) गरी पाँचवटामा सीमित गरिनेछ ।
देब्रेपट्टि माथितिर नेपालको झन्डा हुन्छ । त्यसमुनि एनइपी लेखिएको छ । त्यसले नेपाल देश भन्ने जनाउँछ । त्यसमुनि होलोग्राम छ । अगाडि र पछाडि जडान गरिने दुवै नम्बर प्लेटमा माथिल्लो लाइनमा प्रदेशको नाम छ ।
नम्बर प्लेटको तल्लो लाइनमा सवारी समूह (क्याटेगोरी) हुन्छ । जस्तो ‘बी’ ले चारपांग्रे साना तथा मझौला सवारी भन्ने जनाउँछ । ‘ए’ ले मोटरसाइकल भन्ने जनाउँछ । यस्तो सवारीसाधनको ग्याटेगोरी ‘के’सम्म १२ वटा छ । त्यसपछिको ‘एए’, ‘एबी’ लगायतको अक्षरले त्यो सवारीसाधनको लट नम्बर जनाउँछ । त्यसपछि अन्तिमको नम्बरले सवारी दर्ता नम्बर बुझाउँछ ।
सरकारले १६ जेठ ०७८ सम्ममा देशभरका २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, विडम्बना तोकिएको म्याद सम्पन्न भएर थप पाँच महिना (कात्तिक ०७८) पूरा हुँदा साढे १० हजार सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका छन् । त्यस्तै, अहिलेसम्म एक लाख पाँच हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरिसकिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएपछि त्यसलाई ‘रिड’ गर्ने गेटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका पाँच नाका (नागढुंगा, दक्षिणकाली, अरनिको राजमार्ग, साँखु र टोखा)मा र उपत्यकाबाहिर विभिन्न पाँच प्रमुख ठाउँमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस (आरएफआइडी) निगरानी गर्ने गेट निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं बाहिर भने बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया, पथलैया र इटहरीमा गेट बनाइनेछ । राखिएको गेटबाट सवारी छिर्नेबित्तिकै त्यसको जानकारी केन्द्रीय सर्भरमा उपलब्ध हुनेछ । त्यसबाहेक थप गेट भने सरकारले बनाउँदै जानेछ । यसबाहेक ट्राफिक प्रहरीसँग मोबाइलजस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जाँच गर्ने स्क्यानर थोरै संख्यामा छ । स्क्यानर नम्बर प्लेटको स्टिकरमाथि राख्नेबित्तिकै त्यस नम्बरको सवारीसाधनबारे जानकारी दिन्छ । स्टिकर चारपांग्रे सवारीसाधनमा अगाडि सिसामा र मोटरसाइकलको हकमा नम्बर प्लेटसँगै रहन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट